MAQAAL: Na barro waxaan nahay sagaal xiddig oo ay qasab tahay in ay ku biiraan Manchester United haddii macalin looga dhigo Mourinho. | Haqabtire News
MAQAAL: Na barro waxaan nahay sagaal xiddig oo ay qasab tahay in ay ku biiraan Manchester United haddii macalin looga dhigo Mourinho.
April 26, 2016 - Written by admin
Jose Mourinho oo aad loola xiriirinay shaqada kooxda Man United ayaa lasoo bvandhigay tiro ciyaaryahano ah oo uu suuqa ka qadan karto,
Tababarahan Portugal ayaa la sheegay inuu qorsheynayo sagaal ciyaaryahan inuu ku biiriyo kooxda Manchester United xagaaga dambe marka uu shaqada kala warego Luis Van Gaal,
Marka uu shaqada qabto, waxaa la rumeysan yahay in lasii doono lacag dhan £300million, si uu dib u dhis kooxda ugu sameeyo.
Haddaba shabakadda Lacibiin.com ayaa idin soo uruurisay sagaalka xiddig ee Mourinho ku dhisi doono Manchester United xili ciyaaredka cusub.
1) Renato Sanches: Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhowdahay inay heshiis ku kacaya £ 46m ku la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Benfica xili ciyaaredka dambe
2) Gareth Bale: waxa uu ka gudbin karaa Mourinho dalab £ 100m si uu u geeyo Manchester United, laakiin Bale ayaa laga yaba aysan fasixi doonin kooxdiisa Spain si uu ugu laabto Premier League?
3) Alex Oxlade-Chamberlain, Inkastoo West Ham, Manchester City iyo Southampton dhamaantood isha ku haya xiddiga Arsenal , United ayaa sidoo kale ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga reer England.
4) Neymar: United ayaa la sheegay in dalab £ 140m ah ay ka gudbisay xiddigan xagaagii lasoo dhaafay, haddase ninka katirsan Barcelona ayaa kujira liiska lacagta badan uu ku doonayo Mourinho.
5) Harry Kane: Manchester United ayaa dhowr jeer isku dayday saxiixa weeraryahanka kooxda Tottenham, laakiin Spurs saraakiisha ayaa dooneya inay weeraryahanka heshiis cusub oo uu ku qaadanayo £ 100,000-isbuucii ka saxiixan
6) Gonzalo Higuain: xiddiga Napoli ayaa muddo dheer diirada usaarneyd Arsenal, laakiin Manchester United ayaa ka afduuban karta heshiiskiisa, maadaama uu jecel weyn u qabo Mourinho.
7) Pierre-Emerick Aubameyang: Borussia Dortmund xiddiga ka tirsan ee talantiga leh ayaa aad looga doon doonaya Europe ka dib markii uu xilli ciyaareed cajiib ah Bundesliga ku qaata, waa dooq kale oo Mourinho isha ku hayo.
8) Romelu Lukaku: Ciyaaryahankii hore ee Chelsea ayaa qaab ciyaareed cajiib ah heysta, xilli ciyaareedkan Inkastoo ay ku dhibtooday qeybta dambe ee Horyaalka, hadda qiime sare ayuu kusoo qadan doonaa Mourinho.
9) Zlatan Ibrahimovic: United madaxeeda fulinta Ed Woodward ayaa doonaya inuu soo xerogeliyo xididgan , isagoo u adeegsanaya Jose Mourinho oo ay saxiibo yihiin,